20mm Thickness Sheet(ptfe) - 20mm Thickness Sheet(ptfe) PTFE - 20mm Thickness Sheet(ptfe) Supplier - 20mm Thickness Sheet(ptfe) Teflon - PTFE ပြား Teflon စာရွက်, PTFE လှံတံပေးသွင်း, PTFE ဘုတ်အဖွဲ့ Teflon ရုပ်ရှင်ပွဲတော်, PTFE ချောင်းတွေ Teflon ဘား, PTFE တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ, သတ္တုပါး
နေအိမ် > Teflon စာရွက် > 20mm Thickness Sheet(ptfe) -
20mm Thickness Sheet(ptfe),20mm Thickness Sheet(ptfe)အားဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ် Cox ပလတ်စတစ် အပေါ် Jun 28th, 2015rating: 4.5Quality 20mm Thickness Sheet(ptfe) supply by COX Plastic20mm Thickness Sheet(ptfe)Best 20mm Thickness Sheet(ptfe) supply by China COX Plastic with best price.
20mm Thickness Sheet(ptfe) COX Plastic only offer Virgin PTFE products. ပြန်လည်အသုံးပြုပစ္စည်းပါဝင်တဲ့လျှင်နှစ်ချက်လျော်ကြေး.
FOB စျေး: အမေရိကန် $ 1 – 18 / ကီလိုဂရမ်
Min.Order အရေအတွက်: 300 Kilogram/Kilograms 20mm thickness plate(ptfe) sample available
supply နိုင်ခြင်း: 500 Ton/Tons per Month 20mm thickness plate(ptfe) sample available
ဆိပ်ကမ်း: shanghai / ningbo
ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: L / C ကို,: D / P ကို,T / T,ဝက်စတန်ယူနီယမ်ငွေလွှဲ,MoneyGram,escrow
20mm Thickness Sheet(ptfe) Packing & ပို့ခြင်း
ထုပ်ပိုးအသေးစိတ်: packed by plastic film firstly,then packed by plywooden case
quatity in each case decide by the size of the China PTFE စာရွက်
မူလအစရာ: Zhejiang, China (တိုက်) ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: Cox မော်ဒယ်နံပါတ်: 20mm thickness sheets(ptfe)
ပစ္စည်း: PTFE အထူ: 4mm-80mm အရွယ်: as order
color: အဖြူ mothd: molded machine: molding machine
sample: China PTFE Sheet များ sample available
2) အထူ: 4မီလီမီတာ – 80မီလီမီတာ
ကညာ Ptfe Skived စာရွက် Ptfe Mould စာရွက်,Ptfe စာရွက်